Voaroy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana ny fomba hamatsiana rosehip ao an-trano mba hiarovana ny maha-ilaina azy
Momba ny fananana fanasitranana arabika izay fantatra tamin'ny andro fahiny. Ary noho ny antony ara-pitsaboana, dia tsy ny berries ihany no nampiasainy, fa ny fakany, ny raviny, ny voninkazo. Amin'ny fitsaboana ofisialy, ireo karazam-borona madinika dia heverina ho multivitamine zavamaniry miaraka amin'ny hafanana, ny antibiotika, ny diérika, ny hémostatika ary ny fanaraha-maso ny asan'ny vavony amin'ny gastrointestinal.
Fomba hanamboarana akoho mena: inona no azo atao amin'ny fikajiana ny ririnina
Ny Blaogerra dia iray amin'ireo sakafo malaza indrindra eran-tany. Manana vitaminina sy antioxidants izy ireo. Matetika izy ireo dia ampiasaina hanatsarana ny fahitana, hampihenana ny kolesterola ao amin'ny ra, ary koa mba hampihenana ny mety hahatonga ny aretin'ny ati-doha. Fantatra fa maro ireo toetra tsara dia mijanona na dia aorian'ny fitsaboana hafanana aza, noho izany dia maro ankehitriny ny olona manao dibera ho an'ny ririnina any an-trano.
Ny fampiasana ny valala: ny tombony sy ny fahasimbana amin'ny vatana
Isaky ny lohataona, ny olona dia mankasitraka ny tsiranoka amin'ny heniheny, saingy maro no tsy mahafantatra ny fanasitranany. Mandritra izany, ireo mpitsabo dia mampiasa ny voankazo sy voninkazo amin'ny zavamaniry ho an'ny neurôs, atherosclerose, aretin'ny aretim-po sy aretina ary aretim-po. Amin'ity lahatsoratra ity dia haneho ny toetoetran'ireo voninkazo sy voankazo amin'ny tonon-koditra isika, hilaza aminareo ny toetra mahasoa, ny fahasitranana ary ny fanoherana.
Ny karazana tsara indrindra amin'ny zaridaina goavambe
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny tohotra dia tsy nitsahatra nifandray tamin'ny fandaniana be loatra sy ny fahasarotan'ny fitomboany amin'ny zaridaina. Misy fanazavana misimisy kokoa momba an'io alahelo io, ary saika ny mpamboly rehetra afaka manandrana ny tanany amin'ny fitomboany. Andeha hojerentsika hoe inona ireo karazam-boninkazo avo lenta no heverina ho tsara indrindra.
Ahoana no hanamboarana lingonberry mofomamy: fomba tsotra sy mahasalama miaraka amin'ny sary
Ny lobolebria dia tsy be mpitia be toy izany, toy ny voankazo avy amin'ny fihinanam-bilona na dacha hafa, fa miaraka ihany koa dia manana karazan-tsakafo maro, noho izany izay nanjary nalaza be toy izany androany. Andeha hojerentsika ny sasantsasany amin'ireo mahaliana indrindra ary miaraka amin'ny fomba mahazatra tsotra fotsiny amin'ny fiarovana ny voankazo lingonberry.
Lingonberry amin'ny siropia amin'ny ririnina: dingana isan-karazany amin'ny sary
Ny Lingonberry, na, araka ny niantsoan'ny razantsika azy, ny berry tsy mety maty, dia tian'ny olona maro noho ny tsiranoka mahasalama tsara, ny tsirin-tsakafo ary ny fanasitranana tena manan-danja indrindra. Maro ny zava-pisotro misy alika, saosina, jambes, jambesamby no manana toerana mendri-kaja amin'ny olona mihinana ny fahasalamany ary maniry ny hijanona tanora sy mahery setra mandritra ny taona maro.
Ny fomba hanamboarana ny alim-borona: recipe
Ny olona dia efa fantatra ela momba ny toeram-pitsaboana sy ny sakafo mahavelona ao amin'ny ala mainty hoditra ary nianatra ny fomba ampiasaina ny zavamaniry sy ny voankazo ao amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, ary koa ny fanaovana sokatra, fikojakojana, famokarana ary famokarana ho an'ny fofona. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hanamboarana an'ireny voankazo ireny, ary koa ny tombotsoany amin'ny vatany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voaroy